ခန့်မှန်းချက် - သင်၏စီးပွားရေးသည်အီးကောမတ်စ်စီးပွားရေးဖြစ်လိမ့်မည်။ | Martech Zone
ခန့်မှန်းချက် - သင်၏စီးပွားရေးသည်အီးကောမတ်စ်စီးပွားရေးဖြစ်လိမ့်မည်
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 11, 2015 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2020 Douglas Karr
ငါတို့မြင်ဘူးပြီလား အသစ်ဖွင့်လိုက်သောကွန်ရက်စာမျက်နှာ? ဒါဟာတကယ်ကိုအတော်လေးမယုံနိုင်စရာပါပဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှုဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ၆ လကျော်ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအချိန်မည်မျှကုန်ဆုံးသည်ကိုမပြောနိုင်ပါ။ ပြနာကကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အပြီးသတ်အလုံအလောက်မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရယနေ့ခေတ်မှအခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သူမည်သူမဆိုသူတို့လုပ်ကိုင်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
ငါထွက်။ ဖြုန်းနိုင်ခဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းဆောင်ပုဒ်အပေါ် $ 59ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံပေါင်းစည်းမှုအတွက်စိတ်ကြိုက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ ထိုအခင်းအကျင်း၏တံဆိပ်ကပ်ခြင်းကိုပြန်လည်အသားပေးသည်။ ငါတို့ Podcast နဲ့ White Paper စာကြည့်တိုက်လိုမျိုးနောက်ထပ်ပေါင်းစည်းမှုအချို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသ ဦး မှာဖြစ်ပေမယ့်ဒီဆောင်ပုဒ်နဲ့ပါတ်သက်လို့သင်အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မယ်။
မဖြစ်မနေဖြစ်ခဲ့သည်တစ်ခုမှာရှုထောင့်ကအတူကြွလာတော်မူခဲ့သည် WooCommerce အပြည့်အဝပေါင်းစည်း။ Woo သည်၎င်း၏အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအင်ဂျင်နှင့်အတူဖြစ်သည် မကြာသေးမီက Automattic ကဝယ်ယူခဲ့သည် - WordPress ပိုင်ကုမ္ပဏီ။ ကျနော့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်မှာဒါဟာတောက်ပတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့ B2B မှ B2C သို့သောကုမ္ပဏီတိုင်းသည် ၀ က်ဘ်မှတစ်ဆင့်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မှာကြားခြင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခန့်မှန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လက်လီရောင်းဝယ်သူများနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများသည်ယင်းသို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ချီကာဂိုရှိ IRCE တွင်တီးမှုတ်သံများထဲမှတစ်ခုမှာသင်၏ site ပေါ်တွင်သင်၏စတိုးဆိုင်၌ရောင်းရန်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ တခြား site တိုင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့ဆိုင်ကနေတစ်ဆင့်ရောင်းတာပေါ့။ လက်လီရောင်း ၀ ယ်သူငယ်များသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်မှတဆင့်အွန်လိုင်းများစွာသိုလှောင်ထားသောနေရာများသို့ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ၊ ပါဝင်သည့်စနစ်များနှင့်ပြည့်စုံသောစနစ်များရှိသည်။
အမှန်မှာသုံးစွဲသူများ (နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) သည်သူတို့ထံမှဝယ်ယူထားသော site ကိုယုံကြည်ရန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမေဇုံတွင်မကြာခဏ ၀ ယ်နေပါကအင်တာနက်ရှိလူအချို့မှစျေးဝယ်ကြမ်းခင်းခင်းများကိုသင်မဝယ်တော့ပါ။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ပေါ်ကသူကသူ့ကြမ်းခင်းဖျာတွေကို Amazon မှာရောင်းရင်ရောင်းမှာပါ။
ချီကာဂိုကိုမသွားမီငါထံမှအီးမေးလ်တစ်စောင်ရတယ် တစ်နိုင်ငံလုံး ကျွန်ုပ်၏ကားငွေတောင်းခံရန်လိုအပ်သောအာမခံ။ ကျွန်ုပ်အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးငွေပေးချေရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ ငါအလုပ်ပြန်လာသောအခါငါသည်ငါ့အေးဂျင့်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားမိတယ် နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါ့ရဲ့ငွေတောင်းခံလွှာကိုမပေးရင်ငါ့အာမခံကကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့နောက်ထပ်သတိပေးချက်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ ငါ log in လုပ်ပြီးအကျိုးမရှိပြန်ကြိုးစားခဲ့တယ် - ငါတောင်ရှာမရခဲ့ဘူး ငါ့ငွေတောင်းခံပါ သူတို့ရဲ့အသစ်သောသန့်ရှင်းသော interface ကိုအပေါ် button ကို။ ကျွန်ုပ်၏အေးဂျင့်ကိုခေါ်ရန်သတိပေးချက်တစ်ခုထားခဲ့သည်။
နောက်တစ်နေ့မှာအလုပ်သွားပြီးအလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။ အေးဂျင့်ကိုတစ်ခါမှမခေါ်ဘူး။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာငါ့ငွေတောင်းခံလွှာကိုမပေးခဲ့လို့ငါ့ရဲ့အာမခံသန်းခေါင်အချိန်မှာကုန်သွားမှာကိုအီးမေးလ်တစ်ခုလုံလုံလောက်လောက်ရှိခဲ့တယ်။ အဆင်မပြေဘူးနောက်နေ့နက်မှချီကာဂိုကားမောင်းနေပြီးကျွန်တော်စိတ်မချရတော့။
ဒါကြောင့်ငါ့ browser ကိုကူးလိုက်တယ် Geico။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာမူဝါဒကို ၀ ယ်ဖို့အတွက် real-time quote နဲ့အဆီကောင်းတဲ့ခလုတ်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ ငါခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကစာရွက်စာတမ်းတွေပို့ပြီးကျွန်တော့်ကိုစာတွေပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ ငါဖြည့်လိုက်တာနဲ့ငါ့ပေါ်လစီဟာတကယ်ပဲရှိလိမ့်မယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုနောက်နေခံရဖို့ရှိသည်။
နောက်တစ်ခု - တိုးတက်သော။ ငါသည်ငါ့သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ဝင်သူတို့သည်ငါနှင့်ငါ့သမီးနှစ် ဦး စလုံးအဘို့အကြှနျုပျ၏မော်တော်ယာဉ်သတင်းအချက်အလက်ကြိုတင်လူ ဦး ရေ။ ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော့်ကားကိုထည့်သွင်းဖို့ပေါ်လစီနှင့်အာမခံကဒ်အသစ်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတယ် ကိုပြု ပိုက်ဆံချွေတာ။ ငါအနှစ် ၂၀ ကျော်တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်အတူရှိခဲ့ကတည်းကငါအံ့သြသွားတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့်၎င်း၏အာမခံကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သလား။ မဟုတ်ပါ၊ သူတို့အာမခံကိုကျွန်မဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ကျွန်မရဲ့အေးဂျင့်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအွန်လိုင်းမတတ်နိုင်လို့သူတို့ဆုံးရှုံးတာပဲ။
သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ကျွန်ုပ်လုပ်ငန်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site အသစ်သည်ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ပြည့်ဝပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများထံသို့တိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစတင်ရောင်းချပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရှေ့သို့တိုးတက်ရန်ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လက်ရှိသုံးစွဲသူများစွာကိုပေးသောလက်ကိုင်အေဂျင်စီ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။
မင်းတို့ကမြက်ခင်းတွေကိုထွင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကွာရှင်းတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ကုမ္ပဏီတိုင်းကထုတ်ဝေသူဖြစ်မယ်လို့လူတွေကြိုပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါကုမ္ပဏီတိုင်းမှာအီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုဒ်နောက်ကျတာထက်စောပြီးမြန်လိမ့်မယ်ဆိုတာပဲ။
Social Media Marketing မှသင်၏အသေးစားစီးပွါးရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုသက်သေပြသည့်နည်းလမ်းများ